राजनीतिको शीतलहरमा ‘जय मधेश!’ ‘मधेश’ शब्दलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्‍चारमाध्यममा पनि पक्ष-विपक्ष देखापर्‍यो। विपक्षकाले त यतिसम्म भनिदिए कि यो २०६३ पछिको मधेश आन्दोलनका क्रममा लादिएको आयातीत नाम हो। राणाकाल अघिदेखिकै सरकारी फर्मान, त्यसयताका राजपत्र र स्वयम् बीपी कोइरालालगायतका साहित्यमा ‘मधेश’ यत्रतत्र भेटिन्छ। तीमध्ये केही पनि नपढेका विपक्षीसँग यो शब्दको इतिहासबार... आइतबार, माघ ९, २०७८
के नेपालका पार्टीहरू मर्दैछन्? यतिखेर ‘आइसोलेसन’कै स्थितिमा रहेका पार्टीहरु भरोसा गर्न सकिने अवस्थामा देखिँदैनन्। तिनका गतिविधिले आशा जगाउन छाडेका छन्, तिनका प्राथ... सोमबार, पुस २६, २०७८
प्रचण्डका विकल्प : उत्तरआधुनिक राप्रपा बन्ने कि, छवि ‘लाल’ गर्ने? खासमा कम्युनिस्टहरुले गर्नुपर्ने नै यस्तै हो। धन्न प्रचण्डले चुनवाङमाझैं चिहान खन्नु परेन, यसलाई पनि उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्ध... मंगलबार, पुस २०, २०७८
अरुको व्याख्या थाहा भएन, हामीले बुझेको वैशाख २२ भित्र स्थानीय निर्वाचन हुनैपर्छ हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव मात्र गरेका हौं। संविधान र कानुनको आधार लिएरै वैशाख १४ र २२ ग... आइतबार, पुस १८, २०७८
वैशाखमा यसकारण असंवैधानिक हुन्छ स्थानीय निर्वाचन देश निर्वाचनतिर अग्रसर हुँदैछ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्... शुक्रबार, पुस १६, २०७८
एमसीसीमा नयाँ बहस : अमेरिकाको अनुदान हो कि लगानी? एमसीसी सम्झौता र एमसीसी सहायताको इतिहासलाई केलाएर हेर्दा अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिएको कुरा नै प्रस्ट हुन्छ। यो यस्तो अनुदान हो जु... बुधबार, पुस १४, २०७८
कति प्रहरीले भोग्नुपर्ने हो एसएसपी यादवको नियति? प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील यादवको मृत्युको खबर मेरा लागि अकल्पनीय थियो। जसै यो खबर आयो, विश्वास नै नलागेर मैले प्रहरी सेवामा रहेका... सोमबार, पुस १२, २०७८
झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय : शर्मनाक समाजवाद! हेटौडा उपमहानगरपालिका, चौकीटोलमा रहेको श्रम कार्यालयको छ तले भवनले यतिबेला धेरैको ध्यान तानेको छ। सेतो रङको त्यो भवनको एउटा मोहडामा... शुक्रबार, पुस ९, २०७८
खेलाडीमाथि ‘डन्डा’ चलाएर छोपिएला क्यानको अकर्मण्यता? क्यान र खेलाडीबीच चलिरहेको इगोको लडाइँ हालसालै सृजना भएको होइन। बंगलादेशको चटगाउँस्थित जोहुर अहमद चौधरी रंगशालाबाट विश्वकप खेलेर खेल... बिहीबार, पुस १, २०७८
बेग्लै हुन्थ्यो कांग्रेसको तस्वीर यी चार नेताले ‘बेइमानी’ नगरेका भए सभापतिको निर्वाचन दोस्रो चरणमा पुग्ने निश्चित भएपछि त्यो पंक्तिले कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना अझ सन्निकट बनेको अनुभूति गर... बिहीबार, पुस १, २०७८
शेखर बन्लान् त सभापति? नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरुको एउटै मात्र सोच र चाहना हुनुपर्छ कि देशलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने। हरेक नेपाली ज... आइतबार, मंसिर २६, २०७८
महेश आचार्य: कांग्रेसलाई चाहिएका उपसभापति, तर लडिरहेछन् एक्लै देशभरबाट आएका कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिको ठूलो संख्या कुनै न कुनै गुटमा विभक्त छ। त्यही विभाजनबीच पनि कांग्रेस पंक्तिले थोरै वि... शनिबार, मंसिर २५, २०७८
त्रिविका ‘करार’ नियुक्तिको चिरफार : प्राज्ञिकता मार्न थालिएको अहिले मात्र हो र? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयसम्म करार सेवामा कार्यरत शिक्षकलाई विधिसम्मत ढङ्गले स्थायी गर्नका लागि गरेको भनिएको एउटा निर्णयलाई... बिहीबार, मंसिर २३, २०७८